कम सुत्नुहुन्छ ? याद गर्नुहोस् अनिद्राले हुन्छ डिप्रेसन « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
तपाईं रातको समय अबेरसम्म बस्ने र कम सुत्ने बानी गर्नुभएको छ भने यस्तो बानी सुधार्न आजैदेखि प्रयास गर्नुस् । किनभने, अमेरिकामा भएको एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ कि अनिद्रा बस्दा डिप्रेसनको खतरा बढ्दै जान्छ ।
पछिल्लो समय धेरै मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । अधिकांश मानिसले लामो समय मोबाइल, ल्यापटपलाई दिन्छन् । जसको कारण अनिदो बस्नेको संख्या ठूलो छ । अमेरिकी पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयका पिटर फ्रेन्जेनको अगुवाइमा भएको अनुसन्धानबाट अनिद्राले मानिसको दिमागमा असर पु(याउने तथ्य पत्ता लगाएको हो ।
राति अबेरसम्म जाग्राम बस्दा दैनिकीमा त असर पर्छ नै, यस्तो व्यवहारले मनमा पनि नकारात्मक भावना विकास हुने र मानिस डिप्रेसनको अवस्थासम्म पुग्ने अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निस्केको छ । छोटो समय सुत्ने युवायुवतीमा जोखिम मोल्ने व्यवहार बढ्दै जानुका साथै कुलतमा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुने अनुसन्धानले बताएको छ ।
लामो समय अनिदो बस्दा मस्तिष्कमा भएको पुटामेनमा प्रभाव पर्ने गर्छ । पुटामेनले मानिसको लक्ष्यअनुरूप गतिविधि गर्ने र सिक्नका लागि भूमिका खेल्ने गर्दछ । निद्राको कमीले मस्तिष्कको सिक्ने, शान्त रहने, उत्प्रेरित हुने प्रक्रिया पनि कमजोर हुँदै जान्छ ।
अमेरिकन कलेज अफ न्युरो साइकोफार्माकोलोजीको ५६औँ सम्मेलनमा यस्तो अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । ११ देखि १५ वर्षसम्म गरेको अनुसन्धानले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
अनिद्राका कारण शरीरमा कर्टिसोल हर्मोनको उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ । जसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउँछ । त्यसैले पर्याप्त ननिदाउने मानिस मधुमेहको पनि जोखिममा हुन्छन् । यस्तो बानीले उच्च रक्तचापको समेत जोखिम बढाउँछ । लामो समयसम्म अनिद्राको समस्या भएमा मुटुसमबन्धी रोगबाट पनि ग्रसित हुन सकिन्छ ।
अनिद्राको गम्भीर असर पाचन प्रणलीमा समेत पर्न जान्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई असन्तुलित बनाउनुका साथै यसको गतिलाई धिमा बनाउँछ । जसका कारण कैयौँ रोगले दुःख दिन सक्छ ।